सिद्धबाबाको पहिरोलाई लिएर बन्यो गीत, कलाकार भन्छन्, –नेताज्यू कहिले बन्छ बाटो? - ||NEWS LUMBINI |
२०७८ जेष्ठ, २९
सिद्धबाबाको पहिरोलाई लिएर बन्यो गीत, कलाकार भन्छन्, –नेताज्यू कहिले बन्छ बाटो?
प्रकाशित मिती : March 2, 2019 | newslumbini पढ्न : 1 मिनेट
काठमाडौं- सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–पाल्पाको खण्डको सिद्धबाबा सडकलाई धेरैले ‘मृत्युमार्ग’का रुपमा परिभाषा दिन्छन् । हुन पनि हो यहाँ वर्षनी यात्रुहरुले अकालमै ज्यान गुमाईरहेका छन् ।
घाम वा पानी, हिउँद वा वर्खा जुनसुकै वेला ढुंगे पहिरो खस्छ । गाडीलाई च्याप्छ । यो सडकखण्डमा यात्रा गर्नेहरु भगवान पुकारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तै यथार्थ विषयलाई लिएर कलाकारहरुले नेतालाई प्रश्न गर्दै गीत नै बनाएका छन् ।
स्कटिङले नेता ज्यू टर्ने
कहिलेसम्म जनताको ज्यान मर्ने?
विकास मन्द मन्द, ए नेता ज्यू विकास मन्द मन्द
कहिले बन्छ बाटो यो सिद्धबाबा खण्ड?
यो गीतमा सिद्धबाबा सडकखण्डमा यात्रा गर्नेले अनायासै ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थतादेखी बाध्यताले यात्रा गर्नुपरेको कुराहरुलाई उठान गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन् सिद्धबाबा सडक नबन्दा पाल्पा, गुल्मी, स्याङजा जिल्लाको विकासमा समेत बाधा पुगिरहेको बताईएको छ ।
यो गीतलाई गायक कमल भट्टराई र ममता कोइरालाले गाएका हुन् । शब्द/संगीत कमलको नै रहेको छ । मनिष पन्तको निर्देशनमा बनेको भिडियो गीतको भावअनुसार बनेको छ । भिडियोमा मोडल कृष्ण बाबु र प्रिया भण्डारी देखिएका छन् । साथमा गायक कमल, ममता, कलाकार विजय बम्डेल लगायतले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई मनिष पन्तले नै छायाँकन तथा सम्पादन गरेका छन् । भिडियो बुलबुल मिडिया प्रा.लिको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
-लोकान्तरबाट साभार गरिएको हो
चलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’ को पहिलो गीत रिलिज
कास्की–२ मा बिद्याले भारी मतले जितिन, नेकपाको विजयी र्‍याली : हेर्नुस् फोटो र भिडियोमा
‘हैट’ र ‘फुलन्देकी आमा’को रोमान्टिक प्रेम कथा (भिडियो)
भारतीय गायक सोनू निगमको पोखरामा सुटिङ भएको म्यूजिक भिडियो ‘शिव शंकरा’ सार्वजनिक
लोक गायक पुस्कल शर्माले ल्याए नयाँ एल्बम “दलित” (भिडियो सहित)